Labo weerar oo xalay magaalada Bosaso ka dhacay
April 5, 2015 (GO)- Labo weerar ayaa xalay ka dhacay magaalada Bosaso, waxaana lala beegsadey goob habeenkii ciidamada boolisku gaadiidka ku baaraan iyo guri ku yaalla xaafadda New Bosaso una dhow masjidka Dacwa.
Weerarka koowaad ayaa ka dhacay bar-kantarool oo ciidamada boolisku ku leeyihiin agagaarka Hotel Ramada , wuxuuna ku bilowdey bam gacmeed iyadoo intaas kadibna la maqley rasaaas qaddar daqiiqad ku dhow socotey. Labo qof oo dumar ah ayaa weerarkaas ku dhaawacmey.
Weerarka labaad waxaa lala beegsadey guri ku yaal xaafadda New Bosaso wuxuuna bartilmaameedkiisu ahaa duqa degmada Carmo Maxamed Cali Shire. Guddoomiyaha ayaa halkaas u tegey si uu u booqdo qaar kamid ah qaraabadiisa.
Dhaawac ayaa soo gaarey guddoomiyaha degmada Carmo mid kamid ah ilaaladiisuna wuu geeriyoodey. Weerarka waxaa sidoo kale ku dhaawacmey afar dumar ah oo ku sugnaa guriga la weeraray.
Lama oga ilaa iyo hadda cidda weerarkan ka dambeysey, balse Al-shabaab ayaa weerarro caynkan oo kale ahaa horay Bosaso uga fulisey.
Faah faahin dheeri ah dib ayaan idiinka soo gudbin doonnaa...
Xukuumadda oo dab kusii shiday khilaafka metelaada gobolka Banaadir 03.07.2020. 20:20
Abiy Axmed: Shirqool lagu kicin lahaa dagaal sokeeye ayaan fashilinay 03.07.2020. 19:45
Bayaan "Qaylo-dhaan Qaran ah" kana dhan ah Farmaajo oo lasoo saarey 03.07.2020. 17:45
Xafiisyadda ururada siyaasada Puntland oo qiimeyn lagu sameynayo 03.07.2020. 13:20
Muddo xileedka safiirka Soomaaliya ee Jabuuti oo dhamaaday 02.07.2020. 23:50
Maxaa diiradda lagu saarey shirkii golaha wasiiradda Puntland? 02.07.2020. 23:25